Kuedza Kwevanhu Kukunda Rufu — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
w14 1/1 pp. 4-5
Vanhu Vangararama Nguva Yakareba Sei?
Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha—2004
Unogona Kurarama Nokusingaperi
Nei tisingadi kufa? Bhaibheri rinotsanangura chikonzero chacho. Rinotaura nezveMusiki wedu, Jehovha Mwari,* richiti: “Akaita zvinhu zvose zvakanaka panguva yazvo. Akaisawo nguva isingagumi mumwoyo mavo [vanhu].” (Muparidzi 3:11) Tinoda kurarama panyika tichinakidzwa nokusingaperi, kwete kwemakore 80 chete. (Pisarema 90:10) Ndizvo zvatinoshuva mumwoyo.
Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.
“Achaparadza rufu nokusingaperi, uye Changamire Ishe Jehovha achapukuta misodzi pazviso zvose.”​—Isaya 25:8.
“Izvi ndizvo zvinodiwa naBaba vangu, kuti munhu wose anoona Mwanakomana otenda maari ave noupenyu husingaperi.”​—Johani 6:40.
“Muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu.”​—1 VaKorinde 15:26.
“[Tine] tariro youpenyu husingaperi iyo Mwari, asingamborevi nhema, akapikira kare kare.”​—Tito 1:2.
“Achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo.”​—Zvakazarurwa 21:4.